आमा राष्ट्रपतिलाई तथानाम भन्ने रामकुमारी झाँक्रीलाई मदन भण्डारीकी छोरी उषाकिरण भण्डारीको भावुक पत्र – Online Nepalaja
February 1, 2021 145
आफ्नी आमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उषाकिरण भण्डारीले प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई भावुक पत्र लेखेकी छन्।
नेतृ झाँक्रीले केही दिनअघि गोरखामा आयोजित विरोध सभामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको रिसमा नेता मदन भण्डारीको निधनपछि विद्यादेवी भण्डारीलाई नेता बनाउनु गल्ती थियो भनेर आलोचना गरेकी थिइन्।
उनले भनेकी थिइन्, ‘अन्यथा नहोस्, तमाम दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, सहिदका परिवार हुनुहुन्छ,यहाँहरूलाइ भन्न खोजेको होइन, मदन भण्डारीको ह ‘त्यापछा’डि सेतो सारी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमालेले, त्यसको प्रतिउत्पादन हो– विद्या भण्डारी। आज यो संविधानको चीरहरण गर्ने कारण बनेको छ। त्यसकारण संस्कृति पनि सही हुनुपर्ने रहेछ।’
यसै विषयमा दु:खी हुँदै राष्ट्रपतिकी छोरी उषाकिरण भण्डारीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भावुक पत्र जस्ताको तस्तै :
मेरो ममले मलाई बोलाउनुभयो अनि भन्नुभयो- सबै लिडरसिपमा रहेका महिलाहरूलाई घि’नला’ग्दो आक्षेप लगाउछन्। पहिलेको समयमा इन्दिरा गान्धीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कुरा गर्दा एन्गेला मर्केलको उदाहरण दिनुभयो। आमाको मन हो, आफ्नो घाउ देखाउनुभएन, छोरीहरूमामाथि यस्तो घटनाक्रमले पारेको आहतमा मलम लगाउन र हिम्मत दिन कोसिस गर्नुभयो।
मेरो ममको बारेमा तथानाम भन्न थालेको लगभग २०५२/५३ देखि हो। यो सुरु गर्ने पत्रकार अहिले रिटायर्ड वरिष्ठ पत्रकार र ठूलो नागरिक अगुवा भइसके। उनीहरूका नयाँ र निउँ अवतार अहिले छन्। म त्योबेला ११ वर्षजति थिएँ, ममले फोनमा भन्नुहुँदै थियाे- “म किन अभियानमा ननिस्कनु!? किन घरमा लुक्नु !? उनीहरूले यही चाहेर यो सब गर्दैछन्, म भाग्दिनँ।” मलाई त्यो दिनदेखि नै हिम्मत प्राप्त भयो। ममले हामीलाई आफ्नो साहस र दृढताबाट शिक्षित गर्नुभएको छ।
१ महिनाअघि मैले यही फेसबुकमा भनेको थिएँ- अदृश्य साइबर बुलीबाट अब सडकमा नारा लाउन सुरु भयो, हामीले आवाज बुलन्द नगरे यस्तो क्राइमले झन् ठूलो रूप लिन्छ। एक महिना नबित्दै त्यही भयो। यहाँ रामकुमारी झाँक्रीलाई आफ्नो युवा नेता मान्नेले झाँक्रीलाई सुनाइदिनू-
१. गल्ती सेतो सारीमा होइन, गल्ती दृष्टिकोणमा छ
२. गलत चुनाव ल’डाउ’नु होइन, उहाँमाथि त्यसबेलाका शीर्ष नेताले गरेको व्यवहार र बोलीमा थियो। अहिले उहाँ तपाईंको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस्, गएर
३. तपाईं कम्युनिस्ट स्कुलिङको हो भने सांस्कृतिक आन्दोलन कति पेचिलो हुन्छ बुझ्नुपर्ने। मेरो मम, एउटा अकल्पनीय घटना सामना गर्दै हुनुहुन्थियो। तपाईं सेतो सारीको कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो घरमा सेतो तन्ना, सेतो सोफा सेतै भित्ता थिए। उहाँले ड्याडीलाई मनपर्ने खाना/अचार बनाउन छोड्नुभयो। उहाँका ससाना छोरीहरू हामीले प्रश्न उठाएनौं। तपाईं उहाँको सारीमा प्रश्न उठाउने को हो !? हामी ९/१० वर्षकाले बुझ्याैँ उहाँ ट्रेजेडी (शोक) सँग कोप (सामना) गर्ने कोसिसमा यो सब गर्दै हुनुहुन्थियो। तपाईं महिला, ठूलो मान्छे भएर यति बुझ्नुभएन !!?
तपाईंलाई अर्को कुरा भन्छु- दसैंमा टीका ग्रहण पनि राष्ट्रपति भएपछि बा’ध्यात्मक अवस्था भएर लाउनुभयो। राष्ट्रप्रमुखको निधार खाली हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताले गर्दा उहाँको बूढी आमाले उहाँलाई प्रश्न गर्नुभएन। जमरा मात्रै हातमा दिँदा तपाईं भी’ड जम्मा गरेर किन सांस्कृतिक क्रान्ति नगरेको भनेर प्रश्न गर्ने को हो !?
ट्रेजेडी कोप गर्ने हरेकको आफ्नो आफ्नो बाटो हुन्छ। जुन बाटो स्वयम् त्यो व्यक्तिले पनि भोलिन्टेरिली (स्वेच्छाले) रोजेको होइन। हरेक कुरा नाफा र नो’क्सानमा तुलना गर्न सकिँदैन। यदि तपाईंलाई लाग्छ- आफ्नो माया आफ्नो जीवनसाथी भन्दामाथि करिअर महत्वाकांक्षा हो भने ठाउँ साटौं। तपाईं उहाँको सिन्दुरपोते, रातो सारी, हाम्रो ड्याडी, हाम्रो बाल्यकाल फिर्ता ल्याइदिनुस्। अनि तपाईंलाई हामीसँग त्यस्तो नाफा भएको के छ जस्तो लाग्छ, लिएर जानुस्। झाँक्रीलाई नेता मान्ने र सम्पर्कमा भएकाले यो छोरीको प्रश्न सुनाइदिनू।
PrevTikTok मा भाईरल साथी जस्तै बुवा छोरी मिडियामा । देख्ने जति सबै चकित पर्छन्, बाबु छोरी भनेर कसैले पत्याएनन्, आमा यस्ती रहिछिन् (भिडियो हेर्नुस)
के मुख र जिभ्रोमा खटिरा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? हुनसक्छ यस्तो रोगको लक्षण होसियार।